VPN-yadu ma badbaadiyaan baytarigaaga Android? | Androidsis
VPN-yadu ma badbaadiyaan baytarigaaga Android?
Emilio Garcia | | Batariga, Tababarada
laga yaabee inaad hore u ogeyd aasaaska ku saabsan VPN-yada (Adeeggaas dhijitaalka ah ee ka ilaalinaya daalacashadaada marin sir ah, oo xoojinaya sirtaada onlaynka ah, oo ku siinaya ammaan weyn iyo gelitaanka hawlahaaga internetka), laakiin waxaad weli qabtaa su'aalo ku saabsan qaar ka mid ah sifooyinka ama sida ay u saameyn karto isticmaalka qalabkan oo ku jira qalabkaaga. Mid ka mid ah su'aalaha inta badan ka dhasha arrintan ayaa ah haddii VPN-yadu ixtiraamaan batteriga aaladahayada. Haddii aad rabto inaad wax badan ka ogaato mawduucan, waxaad joogtaa meesha saxda ah.
1 Immisa baatari ah ayuu adeega VPN cunaa?
2 Xalka lagu badbaadiyo batteriga VPN kaaga
Immisa baatari ah ayuu adeega VPN cunaa?
Aynu toos u gaadhno dulucda. Waxa ugu horreeya ee aan u baahanahay inaan ogaano waa taas VPN-yada inta badan waxay ku shaqeeyaan gadaal, taas oo ah, waxay shaqeeyaan inta aan ku samaynayno waxqabadyo kale oo ku saabsan telefoonkayaga. Qayb weyn oo ka mid ah agabka iyo adeegyada lagu fuliyo habkan ayaa isticmaala in ka badan ama ka yar oo xaddi muhiim ah bateriga aaladda. Kiiska VPN-yada ma aha mid ka reeban. Boqolkiiba saxda ah ee batteriga la isticmaalo marka app VPN uu socdo waxay ku xirnaan doontaa saddex arrimood oo waaweyn: Adeegga gaarka ah ee VPN ee la isticmaalo (iyo si gaar ah, heerka sirta ah ee adeeggu isticmaalo iyo haddii uu gadaal ka socdo si joogto ah ama uu go'o), xoogga ishaarada, iyo cadadka batteriga ee isticmaala isticmaalka xogta mobaylka qalabkaaga. Anagoo tixgelinayna inay jiri karaan kala duwanaansho ku xidhan saddexdan arrimood, waxaynu odhan karnaa, sida caadiga ah, Korodhka isticmaalka batteriga haddii aad isticmaalayso VPN waxay noqon doontaa qiyaastii 15%.
Gabagabada ugu horeysa ee aan ka soo qaadan karno waxaas oo dhan waa in, in kasta oo VPN-yadu ay yihiin adeegyo faa'iido badan leh si kor loogu qaado amniga hawlahayaga internetka, Waxay ku leeyihiin qiimo weyn xagga batteriga, taas oo macnaheedu yahay in ay ku talin lahayd in la hubiyo in aad qaadatid tallaabooyin gaar ah oo aad tixgeliso tixgelinta qaarkood si aad u kordhiso waxqabadka batteriga ee qalabkayaga.
Xalka lagu badbaadiyo batteriga VPN kaaga
Sidaan horey u sheegnay, heerka isticmaalka batteriga waxaa saameyn doona adeegga gaarka ah ee VPN ee aan isticmaaleyno. Waa run taas waxaa jiri doona adeegyo qaar oo isticmaala batari ka yar celceliska, laakiin taasi waxay sidoo kale macnaheedu noqon kartaa in VPN-kani uu bixiyaa heer hoose oo qarsoodi ah (iyo sidaas heer gaashaan) marka loo eego kuwa kale ee laga yaabo inay isticmaalaan wax kale. Inta badan adeegyada VPN waxay bixiyaan 256-bit heerarka sirta ah, haddii aan go'aansanno inaan hoos ugu dhaadhacno heerarka hoose, waxaan yeelan doonnaa nolol batari badan, laakiin ilaalin yar. Haddii aynaan doonayn inaan dhimno heerka ilaalinta, Waxaan dooran karnaa isticmaalka borotokoolka waxtarka badan ee cusub, sida borotokoolka LightWay ee uu sameeyay ExpressVPN.
Marka la eego arrinta calaamadda, ogow in nooca isku xirka uu sidoo kale muhiim yahay, awoodda xog badan ayaa sii weyneysa awoodda muuqaalka, sidaas darteed isticmaalka batteriga weyn, taas oo ah sababta qaar ka mid ah hawlwadeennada ay ku talinayaan in la damiyo 5G haddii isticmaalka weyn ee band aan loo baahnayn. kaydi batari Sidoo kale, Calaamadaha WiFi ee wanaagsani wuxuu yareeyaa isticmaalka batteriga, sababtoo ah aaladda (iyo sidoo kale VPN) waa inay geliyaan dadaal yar, kheyraad yar, isgaarsiinta.
Kahor intaanan duubin waxaan rabnaa inaan bixino tabo iyo tabo taxane ah si aan isugu dayno oo kaaga caawinno inaad sare u qaaddo waxtarka batterigaaga markaad isticmaaleyso VPN. Talooyinkaan waxaa ugu horreeya si toos ah VPN ugu rakib routerkaaga wifi. Sidan oo kale, marka aad u dhowdahay routerkaas, ma noqon doonto lagama maarmaan in la bilaabo codsiga u dhigma ee mobile-kaaga. Xalka kale ee xiisaha leh ayaa ah hel batari dibadeed oo aad u isticmaali karto xaalad degdeg ah. Waxaa jira kuwa badan oo badan bangiyada korantada dibadda oo bixiya waxqabad aad u wanaagsan oo raaxo leh in la qaado. Ka dib oo dhan, waa run in ay tahay hal buro oo dheeraad ah, laakiin ka badbaado badan ka xumahay. Ugu dambayntiina waxa jirta arrin ah in aad u fiirsato xidh VPN app marka aynaan isticmaali doonin adeega. Dabcan, waa in aan niyadda ku haynaa in mar haddii aan xidhno in aan la ina ilaalin doonin, ee iska jir!
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Tababarada » Batariga » VPN-yadu ma badbaadiyaan baytarigaaga Android?
Sida loogu isticmaalo Valkyrie ee Clash Royale: hage iyo talooyin
Magacyada kooxaha Whatsapp ee dhalinyarada